Bill Gates sy Napoleon Dynamite | Martech Zone
Alahady, Jolay 23, 2006 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
Mahafinaritra ny mahita fa manana hatsikana i Microsoft!
Tags: bill gatesdinamita napoleon
Jolay 23, 2006 amin'ny 11:33 PM
Ha ha, vidéo mampihomehy be io an! Efa naheno aho fa nanao spoof Napoleon Dynamite i Gates, saingy tsy mbola hitako (afa-tsy ny sary) talohan'ny androany. Betsaka ny zavatra toy izao nataony nandritra ny taona maro, ka azo antoka fa manana fahatsapana vazivazy!
Jul 25, 2006 amin'ny 3: 12 AM
Taiza no nanaovana izany? Faly aho mahita an'i Bill Gates manana vazivazy ao aminy.